Ngathi-iNanjing Zhitian Mechanical and Electrical Co, Ltd.
Ibhokisi yebhokisi yebhokisi yebhola yebhola
Amalungu amathathu Screw extruder
Ukunxiba okuphezulu liner enganyangekiyo
UNANJING ZHITIAN eneemfuno ezizodwa kwimveliso yezahlulo endaweni amawele Screw extruder. Ke uneminyaka engaphezu kwama-20 yamava. Ukwenza iibhokisi zegiya, imigqomo kunye nezinto zokujija zewele ezijijwayo.Sikwabonelela ngenkonzo yokuhlaziywa kweebhokisi zebhokisi kunye nemigqomo.
Inkampani yam inamandla obuchwephesha, izixhobo zokusebenza ngokugqwesileyo, itekhnoloji yokuvelisa phambili, inkqubo yovavanyo engqongqo kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa, enconywa ngabathengi. Ukusukela ukuba iimveliso zenkampani yam ibe sisicelo esivuthiweyo eLeistritz, Coperion, Berstorff, JSW, Toshiba, Jwell, Steer kunye nezinye izinto ezaziwayo.
UNANJING ZHITIAN yasekwa ngo-2006. Ngelo xesha indawo yocweyo yayimalunga ne-1000m2, Abaqeshwa abahlanu kuphela, Oko kwakuphambi kweshishini langaphandle, zonke iimveliso zazenzelwe ukuthengiswa kwasekhaya.
Ngo-2014, indawo yokusebenzela yandiswa ukuya kwi-5000m2Inani labasebenzi lenyuka laya kuma-50, Saseka iqela le-R & D kunye neqela lezentengiso, liphuhlise ishishini.Ngalo nyaka kulo nyaka, abathengi abaninzi ngakumbi nangakumbi banxibelelana nathi, siqhubeka sinceda kwaye sixhasa abathengi abatsha ngakumbi ukuba bangene ekubumbeni icandelo leemveliso.
Ngo-2017, Songeze izixhobo zokuqhubekeka, ezinje ngoomatshini abayi-4 be-CNC, umatshini wokugrumba umngxunya onzulu o-2, isixhobo sokujonga esintathu kunye njalo njalo.Ngethuba lonyaka, abathengi abaninzi nangaphezulu baqhubeka nokuphindaphinda iiodolo kuthi.
Ngo-2018, indawo yokusebenzela yandiswa ukuya kwi-10000m2, izakhiwo ze-Ofisi ziyi-700m2, inani labasebenzi lenyuke laya kuma-90. Kwakhona landise iqela lokuthengisa liye kubantu abayi-6 abanentlanganiso veki nganye, ukuhlangabezana nokunyuka komyalelo kunye nokuphakamisa inqanaba leenkonzo kubo bonke abathengi . Kukulungiselela ngokufanelekileyo kwinqanaba lethu elilandelayo lophuhliso.
Ngo-2019 ngoMeyi, sithathe inxaxheba kwi-CHINAPLAS i-Guangzhou Exhibition ngexesha le-33 ukwenza inqanaba lokuma kwinqanaba lecandelo lezobugcisa, kulo mboniso, i-STD kunye ne-HTD Gearbox debut, abathengi abaninzi ngakumbi abavela e-China nakwimakethi yaphesheya baqala ukwazi thina.
Zonke i-ZT zigcina ingqalelo kuwo onke amanqanaba eenkcukacha, sijonge phambili ekuqhubeleni phambili kunye nawe!
ULUNTU LWE-TIANYUAN, ISITRATO SE-CHUNHUA, ISITHILI SESIJANGANG, NANJING, CHINA
Imigqomo For Twin Screw extruder, WR15E Shaft, Icandelo le-Screwaii le-Sc65, I-Screw Barrel yokuDlula, Iplastiki ye-extruder Screw Barrel, Kabini Screw extruder,